Ahoana no fiasan'ny turbinina na ny rivotra? | Green Renewable
Fa rehefa tonga ny rivotra herinaratra? Ny antecedent mivantana an'ny ankehitriny turbinina rivotra dia ny taloha fikosoham-bary, izay na ankehitriny aza dia mbola ampiasaina ihany, ho an'ny asa isan-karazany toy ny fitrandrahana rano na ny fikosoham-bary. ny Windmill Masinina izay misy lelany na lelany mifatotra amin'ny zana-kazo iraisana, izay manomboka mihodina rehefa mitsoka ny rivotra.
Ity hazo mihodina ity dia mifamatotra amin'ny karazana milina isan-karazany, ohatra ny milina fanaovana fikosoham-bary, pumping water na hiteraka herinaratra.
Hahazoana herinaratra, ny fivezivezin'ny lelany dia mitondra mpamokatra herinaratra (alternatera na dynamo) izay mamadika ny angovo mekanika ny fihodinana ao herinaratra. Ny herinaratra dia azo tehirizina anaty batterie na alefa mivantana any amin'ny grid. Tsotra ny fandidiana, ny mahasarotra dia ny famotopotorana sy ny fananganana turbinina rivotra mahomby hatrany.
1 Karazan-drivotra mahery
2 Turbine mitsangana mitsangana
3 lafiny ratsy
4 Ny lalàm-panorenan'ny turbin-drivotra na turbine rivotra
5 Fitaovana elektrika misy turbinina na valin-drivotra
6 Tombony azo avy amin'ny rivotra turbine haingana raha oharina amin'ireo miadana
7 Ny rivotra mahery matanjaka indrindra eto an-tany
8 Ampy hahazoana herinaratra trano mandritra ny 66 taona
Vatan-drivotra mety ho an'ny axis marindrano, izay tena fahita ankehitriny, na misy koa axis mitsangana.
Avy amin'i Wikipedia ny famaritana ny turbine mitsangana mitsangana na marindrano ho toy ny mpamokatra herinaratra mandeha manova ny angovo kinetika amin'ny rivotra amin'ny angovo mekanika ary amin'ny alàlan'ny turbinin'ny rivotra amin'ny angovo herinaratra.
Ireo izay manana axis mitsangana dia miavaka fa tsy mila ny mekanisma orientation ary inona ny generator elektrika azo alamina amin'ny tany. Etsy ankilany, ireo manana axis marindrano, avelao handrakotra sakany midadasika manomboka amin'ny fampiharana mitokana herinaratra kely ka hatramin'ny fametrahana amin'ny toeram-piompiana rivotra be.
Turbine mitsangana mitsangana
Araka ny voalaza, turbine axis mitsangana na mitsangana tsy mila mekanisma orientation, ary inona no mety ho mpamokatra herinaratra hita amin'ny tany.
Su ambany ny famokarana angovo ary manana kilema kely kely toy ny mila mandeha moto vao afaka mandeha.
Iray amin'ireo olana mahazatra indrindra turbinina rivotra dia ny habeny lehibe, ankoatry ny hovitrovitra sy ny tabataba aterak'izy ireo. Noho io antony io, matetika dia any amin'ny faritra lavitra ny trano no misy azy ireo. Na izany aza, ny orinasa sy ny mpahay siansa manerantany dia manohy miasa manangana turbine kely kokoa (Azonao atao ny mijery lahatsoratra iray natao tamin'ny herin'ny rivotra kely), o mangina izay mety ho hita any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe.
Fa ny iray amin'ireo olana mampanahy indrindra eo amin'ny sehatry ny taranaky ny herin'ny rivotra Ny fiovaovan'ny loharano, izany hoe ny rivotra. ny turbine amin'ny ankapobeny, dia vonona hiasa tsara izy ireo rehefa mitsoka ao anaty zavatra iray ny rivotra hafainganam-pandeha. Amin'ny lafiny iray, ny hafainganam-pandeha farany ambany indrindra dia takiana amin'ny famindrana ny lelany, amin'ny lafiny iray koa dia misy fetra farany ambony.
Ohatra, ny tena fahita matetika dia ireo fetrany ireo Hafainganan'ny rivotra ny 3 ka hatramin'ny 24 metatra isan-tsegondra. Ny kely indrindra dia antsoina hoe ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana, izany hoe, ny kely indrindra ahafahana mamokatra herinaratra vitsivitsy, ary ny ambony indrindra dia antsoina hoe hafainganam-pandeha, izany hoe rehefa efa tsy mamokatra izy io, satria mety hanimba ilay rafitra.
Un Windmill afaka mitokana na miditra toeram-piompiana rivotra, amin'ny tany mamorona ny toeram-piompiana rivotra, eny amoron'ny ranomasina na azo apetraka eny ambonin'ny rano aza izy ireo amin'ny halaviran-dàlana iray amin'ny morontsiraka amin'ilay antsoina hoe Fambolena rivotra any ivelany na any ivelany.
Ny lalàm-panorenan'ny turbin-drivotra na turbine rivotra
Misy toeram-piompiana rivotra an'arivony feno modely TEEH (turbine rivotra axis marindrano). Ireto masinina ireto dia ahitana ireto fizarana manaraka ireto.
Tilikambo sy fototra: Ny fanambanin'ny tilikambo dia mety ho fisaka na lalina, manome antoka amin'ny lafiny roa ny fahamarinan-toeran'ny turbin-drivotra, ny fihantonan'ny nacelle sy ny lelan'ny motera. Ny fototra koa dia tsy maintsy mandray ny tosika ateraky ny fiovana sy ny herin'ny rivotra.
Ireo tilikambo dia mety ho karazany samy hafa arakaraka ny toetrany:
Tubule vy: Ny ankamaroan'ny turbinin'ny rivotra dia miorina amin'ny tilikambo vy.
Tilikambo vita amin'ny beton: Izy ireo dia miorina amin'ny toerana iray, mamela ny haavony ilaina hikajiana.
Tilikambo vita amin'ny beton: Izy ireo dia mivondrona miaraka amin'ny sombin-javatra efa vonona ary apetraka amin'ny toerana iray ihany ny fizarany.
Firafitry ny lattice: Namboarina tamin'ny alàlan'ny mombamomba ny vy izy ireo.
grefy: Afaka manana toetra sy fitaovana amin'ny karazana tilikambo isan-karazany izy ireo.
Tilikambo mast misy fihenjanana misy rivotra: Mampiavaka azy ireo ny turbine misy habe kely kokoa.
Fanodina: Ny rotor no "fo" an'ny rivotra rehetra, satria manohana ny lelan'ny turbinina izy io, mampihetsika azy ireo amin'ny fomba mekanika sy rotation mba hanovana ny tanjaky ny rivotra ho lasa angovo.
Gondola: Izy io no lohan'ny turbinin'ny rivotra, ny fiarovan-doha manafina sy mitazona ny milina turbin rehetra. Manatevin-daharana ny tilikambo ny gondola mampiasa bearings afaka manaraka ny lalan'ny rivotra.
Boaty multiplier: Ankoatry ny fahafahany mahatanty ny fiovaovan'ny rivotra, ny boaty fanamoriana dia manana andraikitra ny fampifangaroana ny hafainganam-pandeha ambany amin'ny rotor sy ny hafainganam-pandehan'ny mpamokatra. Araka ny teniny ihany; mahavita mampitombo ny 18-50 rpm vokarin'ny hetsika voajanahary amin'ny rotor eo amin'ny 1.750 rpm eo ho eo rehefa miala ao amin'ilay generator.
gropy: Izy no miandraikitra ny fanovana ny angovo mekanika ho angovo elektrika. Ho an'ny turbine matanjaka be dia be ny generator mpamono hena indroa ampiasana, na dia be dia be aza ny lozisialy mahazatra mandrindra sy tsy mitovy.
freins: Ny freins mekanika dia ampiasaina amin'ny lalamby mandeha amin'ny herinaratra, ka ilaina ao anatin'izany ny coefficient avo lenta amin'ny fikorontanana amin'ny fanoherana miolakolaka sy mahery amin'ny famatrarana.
Fitaovana elektrika misy turbinina na valin-drivotra
Ny turbine rivotra anio dia tsy vitan'ny lelany sy mpamokatra herinaratra hitondra angovo mora vidy any an-trano fotsiny. Ny turbine rivotra dia tsy maintsy misy a rafitry ny famatsiana herinaratra tsirairay sy ireo sensor maro an'isa. Ity farany dia mahavita manara-maso sy mandrefy ny mari-pana, ny làlan'ny rivotra, ny hafainganam-pandehany ary ny masontsivana hafa izay mety hiseho ao anatin'ny gondola na amin'ny manodidina.
Tombony azo avy amin'ny rivotra turbine haingana raha oharina amin'ireo miadana
Ny tombony lehibe indrindra amin'ilay antsoina hoe "turbine rivotra miadana" dia izy ireo lelany bebe kokoa fa ny rapide sy ny fitaovany matetika mora vidy kokoa. Fa inona ny olanao? Na eo aza ny savaivony lehibe (40 ka hatramin'ny 90 m ny haavony) ary manana rotors izay mahatratra 100 m ny lohany, turbin-drivotra haingana dia maivana noho ny miadana.
Izany dia tratra noho ny mpamokatra herinaratra mahery (0,5 ka hatramin'ny 3 MW) izay manararaotra bebe kokoa ny tahan'ny rivotra avo lenta.
Mazava kokoa, mihetsika haingana kokoa ny lelany, ka ny habe sy vidin'ny boaty multiplier izay mitondra ny mpamokatra herinaratra mihena.
Amin'ny fananana lelany vitsy kokoa, ireo dia azo ahitsy mora kokoa hampifanaraka ny heriny arakaraka ny toetran'ny rivotra. Ny turbine rivotra haingana dia mahatohitra tsara kokoa fihenjanana ateraky ny rivotra mahery. Ny fanetsehana axial noho ny fihetsiky ny rivotra amin'ny rotor mijanona dia kely kokoa amin'ny turbinina haingana noho ny rehefa mihodina izy; ny mifanohitra amin'izay no mitranga ao amin'ny turbine rivotra miadana.
Ny rivotra mahery matanjaka indrindra eto an-tany
Vestas dia nanolotra ny fanavaozana ny turbine rivotra lehibe indrindra eto an-tany. Tsy manana adjectives hilazana ny halehiben'ity turbine ity aho. Ny V164, fitotoana rivotra 220 metatra miaraka aminy Kavina lava 38 metatra, 80 metatra, dia nampifantoka ny sain'ny rehetra liana amin'ny fanavaozana any Danemark.
Ny turbine teo aloha dia afaka namoaka herin'ny 8 MW, ary noho ny fanavaozana dia afaka mahatratra hatramin'ny farany izy izao 9 MW output amin'ny fepetra manokana. Tamin'ny andrana voalohany, ny V164 dia afaka mamorona 216.000 kWh ao anatin'ny 24 ora monja.
Tsy ny firaketana tanteraka ny famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny rivotra iray ihany, fa io no fampisehoana mazava indrindra fa hananan'ny rivotra ranomasina anjara toerana lehibe amin'ny tetezamita angovo efa mandeha.
Ampy hahazoana herinaratra trano mandritra ny 66 taona
Araka an'i Torben Hvid Larsen, Vestas CTO:
"Ny prototype dia nametraka firaketana ho an'ny taranaka hafa, miaraka amin'ny 216.000 kWh novokarina tao anatin'ny 24 ora. Matoky izahay fa ity turbin-drivotra 9 MW ity dia voaporofo fa vonona amin'ny tsena, ary mino izahay fa handray anjara lehibe amin'ny fampidinana ny vidin'ny angovo avy any ivelany izany. "
Matetika ny miresaka momba ny kilowatts dia somary sarotra sy tsy azo atao. Saingy araka ny filazan'ny andrim-panjakana ofisialy, ny ny salanisan'ny fanjifana herinaratra ao amin'ny trano Espaniola dia 3.250 kWh isan-taona. Vola somary avo kokoa noho ny fanjifana isan-taona ny trano an-tanàn-dehibe any amin'ny tanàn-dehibe any Amerika atsimo. Raha raisina izany, amin'ny andro famokarana iray dia afaka mamatsy herinaratra amin'ny trano antonony izy io nandritra ny 66 taona mahery.
Lehibe kokoa noho ny Torres Kio any Madrid ary mitovy amin'ny Ben'ny Tanàna Torre any Mexico, lehibe kokoa noho ny kodiarana vy an'ny London Eye any Londres ny manodidina azy ireo. Ity turbine ity fivoarana io an'ny V164-8.0 MW, turbine misy rivotra izany efa namaky firaketana tamin'ny 2014 ary afaka mamokatra ankohonana britanika 16.000 izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ahoana ny fiasan'ny turbinina na ny rivotra?
Ose dia hoy izy:
Mikarakara 50 km miala an'i Edilberto aho
Valiny amin'i Ose